Waxaan taageero si yar oo raad ka dibna amar dheeraad ah MOQ waa 1000. Price waa gorgortan aad tirada iyo OEM aad LOGO iyo sanduuqa midabka gaar ah MOQ waa 3000.
Haa, waxaan heysanaa koox RD xoog iyo yayna. badeecada laga beddeli karaa sida ay codsigaaga.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan yahay 1 maalin. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 7 maalmood kadib markii ay heleen lacag deebaaji ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay taageero adeega sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Waxaad samayn kartaa lacag bixinta waa in lala xisaabtama our bangiga, Western Union ama PayPal.
1 sano alaabooyinka line dhan Macverin tan iyo taariikhda qaansheegta shixnad.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalaan baakada dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaali xirxirida halis gaar ah alaabta khatarta ah iyo ansixiyey wax rarta, kaydinta qabow heerkulka waxyaabaha xasaasiga ah. Baakadaha Specialist iyo shuruudaha lagu cabayn aan caadiga ahayn la kulmeyso laga yaabaa in lacag dheeraad ah. Sidoo kale waxaan bixinaa dhammaan sidayaal diyaar u ah fursadaha aad.
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ee lagu cabayn oo noo soo sheeg adiga oo preferrence jidka shippment. dalab Best laguu soo diri doonaa si dhaqso badan.